WAR DEG DEG AH : KOMISHANKA OO ICLAAMIYEY MUDAYN CUSUB WAKHTIGA DOORASHADA M/TOOYADDA | Toggaherer's Weblog
Gudida Doorashooyinka Qaranka Somaliland ayaa u cayimay maalinta Doorashada Madaxtooyadu ka qabsoomayso Somaliland 31 May ee sanadkan , Komishanka ayaa kaga dhawaaqay Mudayntan Cusub shir Jaraa’id oo ay Ku qabteen maanta Hotel Maansoor.
Komishanka ayaa ku sababeeyey dib u dhaca doorashada Qaraxii argagaxiso iyo Maalimihii saa’idka ahaa ee ay ku dareen Diiwaangelinta iyo deeq bixiyayasha oo aan bixin Tender kii alaabooyinka lagu qabanyo doorashooyinka iyo waliba Xaga cimilada .
Komishanka ayaa intaa ku daray in Komishanku ay Maalinta Berri ah ay isu yimaadaan Xisbiyadu si loo wada saxeexo Maalintan laguna go’aamiyo maalinta ay dhacayso Doorashadu ee 31 May.
Shirkan maanta ay qabteen Komishanku ee ay ku iclaamiyeen maalinta ay qabsoomayso doorashada Madaxtooyadu ayaanu ka soo xaadirin kana qayb galin Xisbiga Kulmiye.
Xisbiga Kulmiye ayaa maalintii shalay Shaaciyey waxa uu ka qabo Dib u dhaca doorashada isaga oo sheegay in dalka loo sameeyo Dawlad Kumeel gaadha ah golayaashuna ay Ka yeeshaan wada xaajood halka Xibiga UCID isna uu saaka Gudoomiyahoodu BBC da u sheegay in dalka loo sameeyo Xukuumad Ku meel gaadh ah oo dalka gaadhsiisa doorasho .
Geesta Kale Xukuumada Somaliland ayaa maanta Xisbiyada Mucaaridka ah ku eedeysay in ay dalka khal khal gelinayaan.